Umnini-Landlord wam Ngaba ndifuna ukuMhlawula?
ikhaya / Blog / Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York / Umnini-Landlord wam Ngaba ndifuna ukuMhlawula?
Novemba 14, 2017 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Ndiva lo mbuzo malunga nee-2 ngeveki. Kwaye njengawo nawuphi na umbuzo owubuza igqwetha, impendulo ithi: "Mhlawumbi" Impendulo esemthethweni iqinisekisa ukuba uya kuhlala unamalungelo kwindlu yakho / indlu yokufumana irente unelungelo lokurenta. Ngamanye amaxesha lowo ngumnini-mhlaba, ngamanye amaxesha loo mntu ngumntu.
Makhe sijonge izigaba ezahlukeneyo zokujonga imeko kwaye ubone ukuba ngubani na njengomntu orenta ngokuza kuhlawula irente.
1. Kwenzeka ntoni ukuba umnini-mhlaba usabambe isihloko kwipropathi kwaye ikhaya alithengiswanga kwintengiso engaphambili? (Kwakhona, akukho mntu ufunyenweyo uqeshiwe. [Siya kufika kuloo nto ifunyenwe ngumamkeli ngomzuzu.])
Oku kulula. Umnini-mhlaba usenokuba kwinkqubo yokuboniswa kwangaphambili kwaye usenokuba ubhengezile ukubhengezwa, kodwa usengumnikazi wepropathi. Ukuba awuyibhatali imali yokuqeshisa, umnini-ndawo unokukugxotha kwipropathi, akubambe ityala lokuhlawula irente.
Ngokuqinisekileyo oku kusenokubonakala kungalunganga, kodwa yeyona ndlela ikhukoweyo. Umnini-ndawo usenelungelo lokuhlawulwa. Kwaye ukuba awubhatali, umnini-mhlaba unokunyanzelisa amalungelo akhe kwaye ukhutshiwe. Kukho uninzi lwabanini bemihlaba abakwinkqubo yokubekelwa phambili ebakhuphela iinkqubo zokuchazwa kwangaphambili njengoko kunokwenzeka ukuba baqokelele kangangoko kunokwenzeka ngelixa bengazimiselanga ukubuyisela umbolekisi wabo ukuze aqokelele irente eninzi kangangoko anakho.
Nje ukuba umnini-ndawo aphulukane nesihloko sokuthengiswa kwepropathi ngentengiso yesherifu / ifandesi engaphambili kwaye itayitile inikezelwe kumnini omtsha, loo mnini mtsha unelungelo lokufumana irente ebekufanele ukuba uyihlawule.
Ngoku, uyazibuza, "Kodwa uthini ngentlawulo yam yomonakalo?!? !!!" Ewe, khawukholelwe okanye hayi, umnini sithuba esitsha sisengozini yokutsala imali yomonakalo. (bona NJSA 46: 8-20 kunye -21) Njengomntu oqeshiweyo kwi Ipropathi exelwe kwangaphambili, unamalungelo.
2. Kwenzeka ntoni ukuba umnini-mhlaba usabambe isihloko kwipropathi kwaye ikhaya alithengiswanga kwintengiso engaphambili / yentengiso? (Kwaye kufunyenwe umntu owamkelayo.)
Ngoku ubuza, "Yintoni umntu ofumanayo?" Umamkeli udla ngokuba umntu wesithathu (umntu oqhelekileyo okanye ishishini) elityunjwe yinkundla ngenjongo yokugcina impahla igcina imali mboleko (okt ikhaya lakho) nangaliphi na apho Kuyingozi yokuba ipropathi iya konakaliswa okanye ingeniso yerenti ilahlekile. Oku kuthetha ukuba umbolekisi waya enkantolo wacela inkundla ukuba ivumele omnye umntu ongenguye kumqeshisi ukuba aqokelele irente ukuze bahlawule, kwaye inkundla yavuma ukuba olu luluvo lungileyo. Oku kwenzeka rhoqo kwizakhiwo zeiyunithi ezininzi ezithi zichazwe ngaphambili, kodwa zinokwenzeka nakwesiphi na isakhiwo esinabarhwebi okanye indawo yokuhlala.
Kungenzeka ukuba umntu owamkelayo uqeshiwe kwikhaya lakho kwaye umnini-ndlu usazama ukuqokelela irente nangona engenalungelo lokuqasha irente kwakhona. Ukuba akuqinisekanga ukuba ngubani oza kuhlawula, ungavula i-akhawunti yebhanki kwaye ufake imali kwiakhawunti kwaye ke wazise wonke umntu okubuza ngemali ukuba ulinde umyalelo wenkundla ukuze wazi ukuba ngubani ohlawule. Ekugqibeleni, ungaziswa enkundleni ukuba ugxothwe, kodwa ukuba ungabonisa ukuba unemali kwaye uchaze kumgwebi ngento obuyenza nesizathu, izinto ezinqabileyo zincinci kakhulu ukuba uza kugxothwa. Phambi kokuba uzame nantoni na enje, thetha negqwetha lokuqinisekisa ukuba lelona nyathelo lakho lililo. Imeko yomntu wonke yahlukile, kwaye ukufunda izithuba zebhlog kwi-intanethi akusoloko kuyeyona ndlela ilungileyo yokufumana ulwazi malunga nendlela yokuphila ubomi bakho.
3. Kwenzeka ntoni ukuba ikhaya le-tbe lithengiswa kwintengiso yesherifu?
Nje ukuba itayitile iziswe kumnini omtsha, umniniyo unelungelo lokurenta. Umnini-ndlu wakudala usenokuzama ukuyiqokelela, kodwa njengoko bekuchaziwe ngaphambili ungafuna ukuqala ukubambelela kwirente de ube uyazihlawula ngokuqinisekileyo.
4. Kwenzeka ntoni ukuba ikhaya le-tbe lithengiswa kwintengiso yesherifu kodwa kwibhanki / obolekayo obephethe inqaku uyiphumelele ifandesi?
Ibhanki ngumnini-ndawo omtsha kwaye banelungelo lokurenta. Abasoloko bezama ukuqokelela, kungabonakala njengokuwa komoya kodwa oko akuthethi ukuba uphila simahla.
5. Kwenzeka ntoni ukuba ikhaya le-tbe lithengiswa kwintengiso yesherifu kodwa ebhankini / kubabolekisi ababephethe inqaku bayiphumelele ifandesi kwaye bathengisa umhlaba nge2 kwiminyaka kamva kumthengi omtsha?
Ke, kule minyaka mibini ungakhange uyihlawule irente ngoku unomnini-ndlu omtsha ofuna irente, yintoni ekufuneka uyenzile? Ngapha koko, ngokomnini-umnini-ndlu intsha inokwenzeka uthenge ipropathi njengoko injalo kwaye uthenge onke amalungelo ebhanki / ombolekisi. Okuya kubandakanya ilungelo lokuqokelela irente…. Ke, unokufumana isiqu sakho kunye nomntu ozama ukuqokelela iminyaka eyi-2 yerente kwaye kunokwenzeka ukuba awunamali. Kwimeko enje, unokufuna ukuzama ukuza kwisivumelwano nomnini omtsha.
Ukuba ufumana kuzo naziphi na kwezi meko, thetha negqwetha.
Imeko yakho yahlukile kuwe. A Umnini-ndawo / igqwetha uya kuba nakho ukukunika iingcebiso ezingcono emva koko nantoni na oyifumana kwi-intanethi ekhethekileyo kwimeko yakho.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, sinike umnxeba ku 973-200-1111 okanye i-imeyile yethu [Imeyile ikhuselwe].
Amanyathelo ongawathatha ukumisa inkqubo yokubonisa
Amagqabantshintshi ngeLungelo leNtlangulo kwi-New York